शेर बहादुर लाई लाग्छ It'saspear. भीम रावल लाई लाग्छ It'safan. कंस सिटौला लाई लाग्छ It'sawall. केपी ओली लाई लाग्छ It'sarope. सुशील कोइराला लाई लाग्छ It'satree. बामे लाई लाग्छ It'sasnake.
गिरिजा सद्दाम हुसैन कोइराला
गणतंत्र भनेको त गुंडाराज पो आयो नेपालमा
bamdev gautam bhim rawal Constituent assembly constitution cpn uml federalism kans sitaula KP Oli krishna sitaula madhesi janajati kranti 2015 Nepali Congress Sher Bahadur Deuba Sushil Koirala